တူချယ်လက်ထက် ခြင်္သေ့ပြာတို့ ဗိုလ်လုပွဲ ၄ကြိမ်တက်ခဲ့တဲ့ တော့တင်ဟမ် ၀ – ၁ ချဲလ်ဆီး ( ၂ကျော့ပေါင်း ၀ – ၃ ) ပွဲမှ ချဲလ်ဆီး အသင်းသားတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်များ ( Ratings ) - xyznews.co
တူချယ်လက်ထက် ခြင်္သေ့ပြာတို့ ဗိုလ်လုပွဲ ၄ကြိမ်တက်ခဲ့တဲ့ တော့တင်ဟမ် ၀ – ၁ ချဲလ်ဆီး ( ၂ကျော့ပေါင်း ၀ – ၃ ) ပွဲမှ ချဲလ်ဆီး အသင်းသားတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်များ ( Ratings )
မနေ့ညက ကစားခဲ့တဲ့ ကာရာဘောင် ဖလား ဆီမီးဖိုင်နယ် ဒုတိယ အကျော့မှာ ချဲလ်ဆီး ဟာ တော့တင်ဟမ် ကို အဝေးကွင်းမှာ ရူဒီဂါရဲ့ တလုံးတည်းသော သွင်းဂိုးနဲ့ ထပ်နိုင်ခဲ့ကာ ၊ ၂ကျော့ပေါင်း ရလဒ် ၀ – ၃ နဲ့ အနိုင်ရခဲ့ပြီး ၊ ဗိုလ်လုပွဲသို့ တက်ရောက်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။ ထိုပွဲမှ ချဲလ်ဆီး အသင်းသားတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ( Ratings ) ကို အခုလိုပဲ ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ် ။
ဂိုးသမား – ကီပါ အရီဇာဘာလာဂါ ( Rating –9)
ပထမပိုင်းမှာ ထူးထူးခြားခြား အလုပ်မရှုပ်ခဲ့ပေမယ့် ၊ ဒုတိယပိုင်းမှာ အရေးပါတဲ့ ကာကွယ်မှု ၂ကြိမ် စွမ်းဆောင်ခဲ့သလို ၊ လူးကပ်စ် မော်ရာကို ပါးပါးနပ်နပ် ဖြတ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာ ၊ ဟယ်ရီကိန်းကို လူကျွံဘော ဖမ်းကစားနိုင်ခဲ့တာတွေက ချီးကျူးစရာကောင်းခဲ့ပါတယ် ။
နောက်တန်း – ဆီဆာ အက်ဇ်ပီလီကွီတာ ( Rating –7) ၊ အန်ဒရီယာစ် ခရစ်တန်ဆန် ၊ အန်တိုနီယို ရူဒီဂါ ( Rating – 8 ) ၊ မာလန်းဆား ( Rating –9)
ပထမ အကျော့ကအတိုင်း ၄ယောက်တန်း ခံစစ် ကစားပုံကို ထပ်မံ အသုံးပြုခဲ့ပြီး ၊ ဒါဟာ ပထမပိုင်းမှာတော့ အတော်လေး ထိရောက်မှု ရှိခဲ့ပါတယ် ။ တော့တင်ဟမ်ကို ထူးထူးခြားခြား တိုက်စစ်ဆင်လို့ မရအောင် ချဲလ်ဆီး ခံစစ် က တားဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။
အစွန် နောက်ခံလူ နေရာမှာ ပြောင်းကစားခဲ့ရပေမယ့် ၊ ပြင်သစ် လူငယ် ခံစစ်မှူး မာလန်းဆား ဟာ ခံစစ် စွမ်းဆောင်ရည် အရ ပြောစရာ မရှိအောင် ကောင်းမွန်ခဲ့ပြီး ၊ တွန်းတွန်းတိုက်တိုက် ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ကစားနိုင်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ် ။ ဒုတိယပိုင်းမှာလည်း ၄င်းဟာ ၃ယောက်တန်း ခံစစ်ရဲ့ ဘယ်အခြမ်းကနေ အကောင်းဆုံး ကြိုးစားသွားခဲ့ပါတယ် ။
ညာခြမ်းမှာတော့ အက်ဇ်ပီလီကွီတာ ဟာ တခါတလေ တော့တင်ဟမ်ရဲ့ တန်ပြန်တိုက်စစ် ထိုးဖောက်မှု အချို့ကို ခွင့်ပြုခဲ့ရပေမယ့် ၊ ပွဲချိန် အများစုမှာတော့ pressing ကစားပုံနဲ့ အတူ တည်ငြိမ်တဲ့ ကစားဟန်ကို ပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။
ခရစ်တန်ဆန် နဲ့ ရူဒီဂါ အတွဲဟာလည်း ဟယ်ရီကိန်း ၊ မော်ရာတို့ကို အမှားအယွင်း နည်းပါးစွာ တားဆီးပြခဲ့ပြီး ၊ အမြင့်ဘော ယှဉ်လုတဲ့ နေရာတွေမှာ အသာစီး ရခဲ့ပါတယ် ။ ရူဒီဂါ ကတော့ တလုံးတည်းသော အနိုင်ဂိုး သွင်းပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း မလိုအပ်ပဲ ပင်နယ်တီ ဧရိယာ အနားမှာ ဟွိုင်းဘာ့ဂ် ကို လျှောထိုး ဖြတ်ထုတ်ခဲ့လို့ ၊ ပင်နယ်တီ ပေးရခါနီး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။
ကွင်းလယ် – မေဆင်မောင့် ( Rating –6) ၊ ဂျော်ဂျင်ဟို ၊ မတ်တီယို ကိုဗာဆစ် ( Rating – 8 ) ၊ ကော်လမ် ဟတ်ဒ်ဆန် အိုဒွိုင်း ( Rating –7)
တောင်ပံ တိုက်စစ် ၂နေရာကို တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ အင်္ဂလန်သား ၂ဦးရဲ့ ခြေစွမ်း က အသင့်အတင့် ရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ မောင့် ဟာ off the ball အနေအထားမှာ ပိုကောင်းခဲ့ပြီး ၊ အိုဒွိုင်း ကတော့ ဘောလုံး ခြေထဲရှိတဲ့ အချိန်မှာ ပိုကောင်းခဲ့ပါတယ် ။ မောင့် ဟာ ရူဒီဂါရဲ့ ခေါင်းတိုက်ဂိုး အတွက် ထောင့်ကန်ဘောမှ တဆင့် ဖန်တီးပေးခဲ့ကာ ၊ အိုဒွိုင်းရဲ့ ပင်နယ်တီ ဧရိယာ ထိပ်က ကန်ချက် တကြိမ်ဟာလည်း ဂိုးရဖို့ နီးစပ်ခဲ့ပါတယ် ။
ကွင်းလယ် အထိုင်မှာတော့ ကိုဗာဆစ်ရော ဂျော်ဂျင်ဟိုပါ တည်ငြိမ်တဲ့ ကစားဟန်မျိုး ပြသခဲ့ပါတယ် ။ ကွင်းလယ် ထိန်းချုပ်မှု အပိုင်းမှာ တော့တင်ဟမ် ကွင်းလယ်ကို အပြတ်အသတ် အသာစီး ရခဲ့သလို ၊ ဘောလုံး ယှဉ်လုတဲ့ နေရာ ၊ ကြားဖြတ်တားဆီးတဲ့ နေရာ ၊ link-up play တွေမှာလည်း အတော်အသင့် ကောင်းမွန်ခဲ့ပါတယ် ။
တိုက်စစ် – တီမို ဗာနာ ( Rating –7) ၊ ရိုမီလူ လူကာကူ ( Rating –6)
ပွဲထွက်ခွင့် ထပ်ရခဲ့တဲ့ ဗာနာ ဟာ လစ်ပ်ဇစ် က ပုံစံမျိုး အသင်းဖော် အထောင် တိုက်စစ်မှူး နဲ့ တွဲကစားခဲ့ရပေမယ့် ၊ ထူးထူးခြားခြား ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့တာမျိုးတော့ မရှိခဲ့ပါဘူး ။ အဝေးဘောတွေနဲ့ ခြိမ်းခြောက်တဲ့ နေရာမှာတော့ ဗာနာ ဟာ တော့တင်ဟမ် ခံစစ်ကို ဒုက္ခပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။
စနေနေ့က အက်ဖ်အေဖလားပွဲကလို လူကာကူ ဟာ ဂိုးသွင်းခွင့် half-chance ၂ကြိမ် ၊ ၃ကြိမ်လောက် ရခဲ့ပေမယ့် ၊ ဂိုးအဖြစ် မပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပါဘူး ။ ကြံ့ခိုင်မှု ရှုထောင့်အရ တော့တင်ဟမ် ခံစစ်မှူးတွေကို စိန်ခေါ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ၊ အဆုံးသတ်ပိုင်း အားနည်းနေခဲ့တာက စိတ်ပျက်စရာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။
လူစားဝင် ကစားသမားများ – ဟာကင် ဇီယက်ခ်ျ ၊ မားကို့စ် အလွန်ဆို ၊ သီယာဂို ဆေးလ်ဗား ( Rating –5) ၊ အန်ဂိုလို ကန်တေ ၊ ရူဘင် လော့ဖ်တပ်စ်ချိခ် ( N/A )
ပူလီဆစ်နဲ့ ဟာဗက်ဇ် တို့ကို လုံးဝ အနားပေးခဲ့ခြင်း ဟာ မန်စီးတီးနဲ့ ပွဲအတွက် တူချယ်ရဲ့ ကြိုတင် အစီအစဉ် ဆိုတာ သိသာခဲ့ပြီး ၊ အလွန်ဆို ၊ သီယာဂို ဆေးလ်ဗားနဲ့ ကန်တေ တို့ကိုတော့ လက်ကျန် မိနစ်တွေမှာ ပွဲထိန်းဖို့ ထည့်သွင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပုံရပါတယ် ။
Previous Article ယူနိုက်တက် နဲ့ လျှို့ဝှက်ဆွေးနွေးနေတဲ့ နည်းပြ ၊ အေစီမီလန် စိတ်ဝင်စားတဲ့ ယူနိုက်တက် နောက်ခံလူ ၊ ယူဗင်တပ်ဆီ ဘာစီလိုနာ ကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့ ကစားသမားတို့နဲ့ . . . ယနေ့ အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ
Next Article ပွဲစဉ် ၁ မှာတင် ဂယက်ရိုက်တဲ့ အာဖရိကဖလား ၊ ကြားရက်ပွဲရလဒ်တွေ ၊ အပြောင်းအရွှေ့ အကြောင်းတွေနဲ့ . . . နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ